दोश्रो चरणको निर्वाचनमा निधि र सिंहले शेखरलाइ साथ दिने देखाए सङ्केत – List Khabar
Home / समाचार / दोश्रो चरणको निर्वाचनमा निधि र सिंहले शेखरलाइ साथ दिने देखाए सङ्केत
दोश्रो चरणको निर्वाचनमा निधि र सिंहले शेखरलाइ साथ दिने देखाए सङ्केत
admin December 14, 2021 समाचार Leaveacomment 90 Views
समितिका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई हजार २५८ उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले एक हजार ७२९ मत प्राप्त गरेका छन् । सभापतिका अन्य प्रत्यासी पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले ३७१, उपसभापति विमलेन्द्र निधिले २४९ र कल्याण गुरुङले २० मत प्राप्त गरेका छन् ।
सोमबार बिहानदेखि रातिसम्म भएको मतदानमा जम्मा चार हजार ७४३ मतदातामध्ये चार हजार ६८१ मतदाताले मतदान गरेका थिए । मतदानमा कूल ७७ मत बदर भएको थियो । कांग्रेस विधानअनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुन खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नु अनिवार्य हुन्छ । समितिका अनुसार देउवाले ४८.२३, कोइरालाले ३६.९३, सिंहले ७.९२, निधिले ५.३१ र गुरुङले ०.०४ प्रतिशत मत ल्याएका छन्। सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने सभापति देउवालाई विजयी हुनका लागि ८१ मत नपुगेको समितिले जनाएको छ ।
कांग्रेस सभापतिका पाँचजना उम्मेदवारमध्ये संस्थापनइतर समूहबाट फुटेका प्रकाशमान सिंहको भूमिका आफ्नो समूहलाई हराउन सहयोगी बनेको छ । संस्थापन पक्षबाट फु’टेका विमलेन्द्र निधिले अपेक्षाकृत मत प्राप्त गर्दा प्रकाशमानको उम्मेदवारी संस्थापनइतर समूहको पहिलो चरणको जितमा बा’धक देखिएको छ ।
नतिजा बाहिरिएसँगै दुबैको ध्यान सभापतिको उम्मेदवार रहेका, तर दोस्रो चरणको मतदानबाट बाहिरिएका प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधितिर हुनेछ । अब दोस्रो चरणको चुनावमा कसलाई सघाउने भन्ने विषयमा निधि र सिंहबीच मंगलबार बिहान टेलिफोन वार्ता भएको छ । दुई नेताबीच आ–आफ्नो टिमसँग छलफल गरेर मात्र कसलाई सघाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिने कुराकानी भएको बताइएको छ । यसअघि प्रकाशमन र निधिले दोस्रो चरणको मतदान भए देउवालाई नसघाउने बताएका थिए ।
सभापति पदकाे नतिजामा शेरबहादुर देउवाले बहमुत पुर्‍याउन नसकेपछि उनका निकटस्थ नेता बालकृष्ण खाण नेता प्रकाशमान सिंहलाई भेट्न चाकस्सीबारी पुगेका छन् । सभापतिका लागि पहिलाे चरणमा पाँचमध्ये कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत ल्याउन नसकेपछि देउवा र शेखर काेइरालाबीच चुनाव हुने भएपछि गृहमन्त्रीसमेत रहेका खाँण सिंहलाई भेट्न पुगेका हुन् । सिंह पनि सभापतिकाे दाैडमा थिए । तर, उनी पहिलाे चरणबाट बाहिरिएका छन् ।
पहिलो चरणमा खसेको कुल ४६८१ मतमध्ये देउवाले २२५८ प्राप्त गर्दा शेखरले १७२९ मत प्राप्त गरे । प्रकाशमानले ३७१ मत प्राप्त गरेका छन् भने विमलेन्द्र निधिले २४९ मत प्राप्त गरेका छन् । यदि दुवैजनाले शेखरलाई समर्थन गरेमा देउवालाई दोस्रो कार्यकाल सभापति बन्न सकस हुनेछ ।
संस्थापनइतर समूहबाट एकैजनामात्र उम्मेदवार थिए भने पहिलो चरणमै जित्न सक्ने देखिएको छ । शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइरालाबीचमा जति मतान्तर छ, त्यति मत प्रकाशमानले नपाए पनि समूह नफुटेको भए यो मतमा अरु थपिने थियो ।
उता निधिले एक सय मत कटाउन नसक्ने देउवा पक्षको आँकलन भने फेल भएको छ । हुन त विमलेन्द्र निधिले देउवा समूहमा बगावत नगरेका भए संस्थापन पक्षले पहिलो चरणमै जित्ने निधिले पाएको मतले देखाउँछ । तर यसपटक निधिले धेरै अघि नै आफूलाई सभापतिको उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेर देउवा समूहबाट अलग्गिएका थिए ।
पहिलो चरणमै जित्न संस्थापन पक्षले सत्ता र शक्तिको सम्पूर्ण प्रयोग गरेको थियो । तर तितरवितर भएको संस्थापनइतर समूहबाट अन्तिममा उम्मेदवार बनेका डा. शेखर कोइरालाले पाएको मत देउवाले सोचेभन्दा बढी भएको एक नेताले बताए । प्रकाशमान नउठेको भए शेखर पहिलो चरणमै जित्नसक्ने रहेछन् भन्ने टिप्पणी समेत भइरहेको छ ।
Previous आज देखि टिकटक बनाउन नपाइने, बनाएमा कारबाही गरिने
Next राति अबेरसम्म बस्ने बानी मुटुको स्वास्थ्यको लागि खतरा